May Nyane: January 2011
အမှားတရာကို ကျကျနန သိမ်းထုပ်လို့။
ဒီတလော.. ရယ်စရာတွေ များ များ များ
ဟိုမှာ ဒီမှာ ရယ်စရာတွေချည်းဆိုပဲ..
တလောကလုံး ရယ်စရာတွေနဲ့ ဖုံးလို့။
အို.. အသင်လောက… တဲ့။
လောကကြီးက မတရားပါဘူးရှင်.. လို့
ပြည့်တန်ဆာ မချိုက “မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေ၀င်သည်”.. မှာ ပြောတယ်
ဆိုက်ကားဆရာ ကိုကျော်ကတော့ လောကကြီးက သူ့ဘာသူနေတာ အပြစ်မရှိဘူး..
အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကသာ လောကကြီးကို လွှဲလွှဲချနေတာ..တဲ့။
ခုလို အေးခဲခဲ ဆောင်းရာသီဆို
အလိုလို ငိုချင်တာပဲ.. စိတ်ကျ။
မမ ပြုံးတာ အားရ ပါးရ.. တဲ့။
အမုန်းတွေကို လှတ ပတ ခြယ်သထားတာ..။
၂၂ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၁။
၂၀၁၀ ဟာ တေးသံသာတွေ ကြိမ်ရေများများ လွင့်ပျံ့ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါရဲ့..။
မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်များ… မင်္ဂလာရှိသော အပေါင်းအပါတချို့နဲ့.. မင်္ဂလာရှိသော အမှုအခင်းတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့။ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ပါပဲလေ..။ တချို့သော အမင်္ဂလာများကိုတော့ ရယ်မောဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရ..။ အမှန်တရားဘက်မှာ ကိုယ်ရပ်ခဲ့တယ်လို့ သေချာတာ တခုနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရလေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မြိန်ယှက်ဖွယ်..။
“ကိုယ်မေးမယ်.. ဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲ”ဆိုတဲ့ သီချင်းကို အော်ဆိုရင်း အခါများစွာကလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သွားနိုင်ပါဦးမလား..။ ဘ၀ရှင်သန်ရေးမှာ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အမည်နာမက ငွေကြေးထက် အရေးကြီးတယ်လို့ ခံယူသူတယောက်အတွက် ရှေ့လာမယ့် ၂၀၁၁မှာ အခိုင်အမာ ဆုံးဖြတ်ရမှာတွေက စောင့်ကြိုလို့..။
ခုလောလောဆယ်တော့ ကျမက လမ်းဆုံမှာ…။
(အင်း လူဆိုတာကိုက လမ်းဆုံမှာ မကြာခဏ ရပ်ရသူတွေ ထင်ပါရဲ့။)
၂၀၁၀ မှာ… ကိုယ့်ဘာသာ သေချာတာကတော့ အမှန်များများ အမှားနည်းနည်း…၊ မေတ္တာတရား များများ.. အမုန်းစိတ် နည်းနည်း…၊ အတ္တ များများ ပရ နည်းနည်း..၊ စေတနာ များများ.. နာလိုခံခက် နည်းနည်း…။
၂၀၁၁ မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ရင်.. စာတွေဖတ်.. စာတွေရေး..။ မိသားစုကို ချက်ပြုတ်ကျွေး၊ အပင်တွေစိုက်..။ စိတ်ပျက်စရာတွေ မတရားတာတွေ မှားနေတာတွေကို ကျောခိုင်း..၊ ကိုယ့်ဘာသာပဲ ငြိမ်းချမ်းအောင် တည်ဆောက်…၊ ဘာခံစားချက်ကိုမှ မွေးမြူမထားဘဲ… ပြုံးရယ်ပြီးတော့သာ နေနိုင်ချင်တယ်…။
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Happy New Year!!!!!!!!!!!
Cheers!! လို့ ရှန်ပိန်သောက် ဆုတောင်းကြတယ်..
ဆုတောင်းလေ့မရှိတဲ့ ကျမအတွက်တော့ ဒီတကြိမ်မှာ တကယ့်ကို လိုလိုချင်ချင် ဆုတောင်းချင်နေမိတာ အမှန်ပါပဲ။
၂၀၁၁ အတွင်းမှာ ဘ၀အတွက် မှန်သော လမ်းကိုသာ ရွေးချယ်နိုင်ပါစေ… တဲ့။
ဟုတ်တယ်.. ကျမ အဲလို ဆုတောင်းလိုက်မိပါတယ်..။
၁ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၁ တနင်္ဂနွေ။
at January 01, 20119comments: